पौँदेलीहरुको न्वागी मेला खारबजारमा सम्पन्न : भलिवल प्रतियाेगितामा कालिका स्पोर्ट क्लव विजयी ! – ebaglung.com
२०७४ मंसिर ३, आईतवार १०:२३	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बागलुङ (खर्वाङ), २०७४ मंसिर ३ । बडीगाड गाउपालिकाको ग्वालिचौर खारबजारमा यस क्षेत्रकै सर्वाधिक ठुलो न्वागी मेला सम्पन्न भएको छ । बागलुङ र गुल्मी जिल्लाको सीमानामा रहेको पौँदी अमराईवासीहरु (पौँदेलीहरु)ले नयाँ धानबाली भित्र्याएको अवसरमा वषौँ देखी मनाउदै आएको न्वागी पर्व मेला यस वर्षपनि भव्यरुपमा मनाईएको छ ।
नयाँ धानको चामललाई विभिन्न परिकारयुक्त बनाएर खाने ख’वाईने प्रचलन नै न्वागी हो । सामान्यतया नयाँ धानको चामल दहीमा भिजाएर न्वागी खाने प्रचलन सबै ठाउँमा रहेको भएपनि खारबजारमा यस पर्वलाई विशेष महत्वकासाथ पौँदेलीहरुले मनाउने गर्छन् ।
३० को दशक सम्म ग्वालिचौर, दगातंडाँडा, सिसाखानी, पाण्डवखानी, रिघा लगायत साबिकका गाउपन्चायतहरु गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत रहेका थिए पछी जिल्लाहरुको सीमांकन मिलाउदा यी गाउपन्चायतहरु बागलुङ जिल्लामा गाभिएपछी पौँदी विभाजित भएको हो ।
यो स्थानीय जर्डन जातको धानको चामललाई, दही, केरा, सिलाम, चिनी, मह आदिको समिश्रणबाट तयार पारिएको न्वागीलाई पौदीबासीहरुले विधिवत रुपमा शुभसाइत जुराएर आ– आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र र आफन्तजनहरु बोलाएर न्वागी खाने ख’वनउने प्रचलन रहेको छ ।
यो पर्व गुल्मी, बाग्लुङ्ग, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान लगायतका जिल्लामा बिशेष रुपमा मनाउने गरिन्छ । गुल्मी र बागलुङको संगम स्थल ग्वालीचौरको खारबजारमा सञ्चालन भएको न्वागी मेलामा पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । मेलामा यस क्षेत्रमा कृषकहरुले उत्पादन गरेका हिउँदे र नगदे खाद्यान्न, बेमौसमी कृषि उपजहरुको प्रर्वद्धन र प्रोत्साहन गर्न कृषि मेला प्रर्दशनी गरिने पौदी न्वागी मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कलाधर घिमिरेले ईबागलुङलाई जानकारी दिए ।
यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध मेलाको रुपमा परिचित न्वागी मेलालाई पौदीबासीहरुले महत्वपूर्ण पर्वका रुपमा मनाउने गर्दछन ।
‘मैले जान्ने बेलाबाटै यो मेला लाग्थ्यो, अहिले धेरै बर्षसम्म जिवितै छ,’ स्थानीय मोहलाल घिमिरेले भने,‘न्वागी हाम्रो सानो दशैँ हो ।’ नयाँ जर्डन धान जति पहिले काटे पनि न्वागी नखाएसम्म नखाने प्रचलन रहेको उनले बताए । मेलामा बढि मात्रमा फलफुल तथा स्थानीय रुपमा उत्पादित कृषि उपजहरुको कारोबार राम्रो हुने गर्दछ । यसपालीको मेलामा डेढ करोड भन्दा माथिको आर्थिक कारोबार भएको मेला समितिका कोषाध्यक्ष प्रदिप खरेलले जानकारी दिए । मेलालाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । मेलालाई मध्येनजर गरि विभिन्न स्थानहरुबाट आफ्नो व्यापार लिएर खार बजारमा व्यापारीहरु आउने गर्दछन् ।
मेलामा सामान्य फलफूल पसलदेखि ठूला होटल व्यवसाय र झुला पिङ्गका गरी ६० वटा स्टलहरु रहेको खरेलले बताए । मेलामा भलिवल प्रतियोगिता, साँस्कृतिक तथा कृषि मेला प्रर्दशनी, सोरठी भैलो प्रर्दशनी, रेकर्ड डान्स लगायतका कार्यक्रमहरु मुख्य आर्कषणका रुपमा रहेको आयोजकले बताएको छ । मेलामा बिविध साँस्कृतिक तथा भलिबल प्रतियोगीता समेत हुने सम्पन्न भएका थिए ।
न्वागी पर्वका अवसरमा राखिएको खुल्ला पुरुष भलिवल प्रतियाेगितामा कालिका स्पोर्ट क्लव भव्रेटा प्रथम भई ८५ हजार ५ सय ८५ रुपैया हात पारेकाे छ भने उपबिजेता सनराइज युवा क्लव जुग्जा खाेलाले ५५ हजार ५ सय ५५ हात पारेकाे छ भने बुर्तिबाङ राईजिङ युवा क्लव र न्यु डिभाई युवा कल्व टुनिबाेट सान्ताेना भएका छन ।
कार्यक्रम कृषि प्रर्दशनी स्थानिय तथा राष्ट्रिय कलाकार लगाएतले अाफ्नाे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमकाे सम्पुर्ण बिजेता टिमलाई गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरसिह पाईजाले टिका र पुरस्कार बितरण गरेका थिए ।
सांस्कृतिक कार्यक्रम तर्फ लोक दोहोरी गायीका देवी घर्ति, लोक दोहोरी गायक बसन्त थापा तथा हाँस्य कलाकार बल्छी र राजु मास्टरको बिशेष प्ररस्तुती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा मेला ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कलाधर घिमिरेको अध्यक्षता तथा सचिब बिष्णु प्रसाद आचार्यको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
*** भिङगिठेबाट पत्रकार बिमल खड्का, गुल्मीबाट पत्रकार अनिश शर्मा गैरे, टोपलाल अर्याल, खर्वाङबाट पत्रकार कमल पौडेलको सहयोगमा ।
यो लिंक पनि पढौं:
बडीगाडको न्वारमा शंकास्पद बस्तु (बम ?) फेला